Fanakanana ny fiankinan-doha: Fantaro ny fiasan'ny vatanao!
3 septambra 2018 26 Novambra 2021
Ireo izay mitady fihenam-bidy haingana sy tsy mijaly loatra dia mitady vahaolana izay toa mahomby kokoa sy mitondra vokatra haingana. Noho izany, ny fikarohana ny malaza mpampijanona tena matanjaka izy amin'izao fotoana izao any Brezila sy any amin'ny ankamaroan'izao tontolo izao.
Ireo fanafody sy fanampin-tsakafo ireo dia mampanantena fa ho very ny faniriana hihinana ilay olona, ​​noho ny fanehoan-kevitra simika sasany hitranga ao amin'ny vatany.
Na dia misy lafiny tsara aza ho an'ny sasany dia mety hampidi-doza ny fampiasana ireo vokatra ireo raha tsy misy fanaraha-maso ara-pahasalamana.
Ao amin'ny lohahevitra manaraka dia ho azonao ny fomba fiasan'ny fanafoanana ny fiankinan-doha, raha azon'ny rehetra atao izany, ny voka-dratsin'ity akora ity sy ny fampahalalana hafa mifandraika amin'izany. Zahao hoe!
fanafoanana ny fahazotoan-komana voajanahary
Misy karazana fanafoanana ny fiankinan-doha miparitaka manerana ny tsena Breziliana. Ireo lazaina fa natoraly dia fanampin-tsakafo sasany izay, amin'ny alalan'ny fanehoan-kevitra ao amin'ny vatanao, dia mampihena na mampitsahatra ny hanoanana.
Na izany aza, na dia eo aza ny anarana voajanahary, dia tsy maintsy mitandrina ihany koa amin'ireo vokatra ireo. Ankoatra ny sasany amin’izy ireny dia tsy misy vokany, ny sasany kosa dia tokony horaisina amim-pitandremana sy amin’ny fandraisana andraikitra mba tsy hihena, very otrikaina ilaina ary tsy ampy sakafo intsony vokatr’izany.
Amin'ny ankapobeny dia amidy amin'ny kapsily izay ilain'ny olona imbetsaka isan'andro ireo fanafoanana ny fiankinan-doha ireo. Ireo pilina ireo dia mifandray amin'ny vatanao ary miteraka fanehoan-kevitra izay manakana ny faniriana hihinana.
Ankoatra ny voajanahary izay malemy kokoa nefa mety hampidi-doza ihany koa, dia misy ny fanafody misy tsipika mainty izay mampihena ny fahazotoan-komana ihany koa.
Ireo, amin'ny tranga tena voafaritra ihany ary miaraka amin'ny prescription ao amin'ny pharmacy ihany no azo alaina.
Misy fanafody sasany izay manakana ny fiankinan-doha ary misy bara mainty. Na izany aza, ny fampiasana azy ireo dia voafetra ho an'ireo izay efa voan'ny aretina ary mila an'io fanafody io mba ahafahana mitsabo sy mamerina ny toe-javatra ratsy.
Herbal fanafoanana ny fahazotoan-komana
Ny fanafody anana no anarana siantifika indrindra nomena ny vokatra voajanahary sy fanafody ampiasaina amin'ny fitsaboana hafa amin'ny aretina sy olana ara-pahasalamana sasany.
Ny malaza indrindra amin'ireo rehetra amidy any Brezila amin'izao fotoana izao dia Garcina, izay hita amin'ny endrika kapsule sy amin'ny habe isan-karazany.
Miovaova ny sandan'io fanafody raokandro io, ary misy vidiny kokoa. 30 resy.
Fanafoanana ny filan'ny ankizy
Raha miaraka amin'ny olon-dehibe dia efa mampidi-doza ny maka fanafoanana ny fiankinan-doha amin'ny tenany, na dia zavamaniry sy voajanahary aza izy io, amin'ny ankizy dia mbola mampidi-doza kokoa izany. Vidio ihany io fanafody io ho an'ny zanakao, raha lazain'ny dokotera, manendry sy manara-maso ny fampiasana azy.
Ho an'ny ankizy dia sarotra ho an'ny dokotera ny manondro ny fampiasana an'io fanafody io, indrindra indrindra, ary amin'ny toe-javatra tsy fahita firy, ny fanafody raokandro, satria afaka manampy amin'ny fampihenana ny matavy loatra amin'ny zaza izany.
Na izany aza, ny tena mahazatra dia ny famerenana ny sakafo sy ny teknika hafa hampihenana ny lanjan'ny zaza sy hahatonga azy ho salama.
Misy ny dite sasany, izay mahasalama 100% ary azo antoka raha raisina amin'ny saina mahazatra, izay afaka manampy amin'ny fanakanana ny ampahany amin'ny filanao. Tsy hanakana ny hanoanana anao izy ireo, fa hampihena ny fanirianao hihinana fotsiny.
Ny malaza indrindra dia ny dite maitso, ginger, paoma, voasarimakirana, hibiscus, anana 7 ary dite voasary makirana. Ankoatra ireo dia misy dite hafa misy ravina sy fakany samy hafa izay manana io toetra manakana ny ampahany amin'ny filan'ny olona io.
Manampy anao hihena ve izany?
Ny hany tanjona amin'ny fandraisana fanafoanana ny fiankinan-doha dia ny fampihenana ny lanjany. Izany tokoa no tena izy. Mety miasa izany ary mety tsy.
Ny tsara indrindra dia ny fananana fahazarana ara-pahasalamana, ny sakafo voalanjalanja, ny fanatanjahan-tena, ny rano be isan'andro ary ny fampiasana ny dite na kapsula fotsiny ho fomba hanatsarana ny fahaiza-manaonao mba hampihenana haingana kokoa.
Fanafoanana ny fiankinan-doha: ahoana ny fomba handraisana azy?
Ny dite fanafoanana ny fahazotoan-komana azonao raisina in-3 isan'andro, kaopy iray maraina, iray amin’ny tolakandro ary iray amin’ny hariva. Raha ny capsules, izay mamaritra ny dosage dia ny dokoteranao manokana. Anisan'ny fanafody raokandro, ny fampiasana ny 1 hatramin'ny 3 pilina isan'andro.
Manana contraindication ve ianao?
Ny tsirairay amin'ireo zava-mahadomelina sy fanampin-tsakafo manafoana ny fahazotoan-komana ireo dia manana ny contraindications manokana, ankoatra ny mahatonga, ho toy ny vokany, fahalemena, fanina, tsy fahampian-drano ary tsy fahampian-tsakafo.
Noho izany, mba hahitana raha azonao atao na tsia ireo fanafody sy fanampin-tsakafo ireo, ny tsara indrindra dia ny manatona dokotera ary manapa-kevitra miaraka aminy ny fomba tsara indrindra hampihenana ireo kilao izay manelingelina anao.
Raha tianao ity lahatsoratra momba ny karazana fanafoanana ny fahazotoan-komana ity, zarao amin'ny tambajotra sosialy!